Amanqanaba okuPhucula amaxesha eNgxaki
Ukufumana Ngeengxaki Zobunzima
Ukuba kukho into eqinisekileyo, ngamnye wethu uya kufumana uhlobo lobunzima ngelixa sisaphila kulo Mhlaba. Ngelishwa, abanye bethu baya kuba namaqela angaphezu kwesabelo sethu senkxwaleko, nokuba kwindawo yomsebenzi okanye ebomini bethu.
Kule minyaka, ndivakalelwa kukuba ndinelungelo lokuba namava kunye namaxesha amaninzi, iimeko eziguqula ubomi. Nangona ngamanye amaxesha ndifumana kunzima ukugcina isimo sengqondo esilungileyo ngelixa sisebenza kwiimeko ezinzima, ingaba kukulahlekelwa ngumsebenzi, ukuhlukana kobudlelwane, ukukhangela ukuphakanyiswa okanye ukulwa nenkinga enkulu yempilo, ndiyazi ukuba ngokusebenza ngokufunda kunye nokufunda ukufumana injongo kunye nenjongo kwezi meko apho ndiza kudibana nokuphumelela kwam.
Ndandisoloko ndathi "sinokuhlangabezana nobunzima", kodwa asikwazi ukuba 'sibhekane neengxaki.' Xa ndifumana into engathandekiyo ndiyazibuza yona "Yintoni endiyifunayo kule meko kwaye indlela yam yokudlulela ngayo inikezele njani kwimeko yam yangoku?" Esikhundleni sokungcwaba intloko kwintlabathi nje elinde ithuba lokudlulela, okanye i-Universe ukulibala malunga neemeko, ndisebenza ngentsholongwane, enceda ekunciphiseni intlungu kunye nokukhungatheka.
Njengoko ndivavanya oko ndikufundileyo kunye nendlela endandikhule ngayo kwiminyaka, ndiyilungiselele izicwangciso ezili-10 zokusindisa eziye zangenza ukuba ndifikelele kwixesha elinzima.
Ukunyamezela - Oku kunokuba nzima kunazo zonke ukufezekisa nangona into yokuqala kufuneka siyihlakulele xa sibhekene nobunzima. Isihluthulelo sokuphuhlisa umonde kukukwazi ekupheleni konke kuya kusebenza ngendlela ejoliswe kuyo. Kwakhona, isitshixo ekuphuhliseni umonde kukunikezela kwinto yokuba kukho ixesha lokulungisa yonke into. Ndiyathanda ukusebenzisa ukufanisa-ukuba ukuba ufuna ukufumana umntwana nakuba wena (okanye umfazi wakho) unokukhulelwa kufuneka ulinde ixesha lokubeleka ngaphambi kokuba umntwana afike.
Ukuxolela - Ukuxolela omnye umntu ngokukuphosakela. Ngokungazivumeli ukuxolela usebenzise amandla amaninzi amaninzi njengoko uhlala ucinga kunye nemvakalelo. Funda ukuxolela nokusebenzisa amandla afanayo ngendlela efanelekileyo yokubuyisela ubomi bakho. Nangona ukuxolela omnye umntu uqiniseke ukuba uxolele ngenxa yeempazamo okanye ukungaphumeleli, mhlawumbi isahlulo samandla asibi sisala.
Ukwamkeleka - Yamkela isandla oye wenziwe ngayo - nokuba iipeksi ezimbini zinganqoba umdlalo.
Ngombulelo - Yibulela ubunzima. Inkathazo yindlela kaThixo yokuthi ufanelwe iimfundiso zam.
I-Detachment - Sonke sivile ibinzana elithi "Ukuba uyayithanda into ethile, yikhulule." Ukuba ibuyele kuwe, ingeyakho. Ukuba kukho into ekubhekiselelwe kuyo ukuba yinxalenye yobomi bakho, iya kuba yinto ebonakalayo, ngoko akukho mfuneko yokubambelela nantoni na.
Ukuqonda: Kutheni le nto kunye na Kutheni? - Ndiyayiqala ukucinga xa kwenzeka into engenziyo kuthi sibuze isizathu sokuba ndize? Ngokuqhelekileyo ukubuza lo mbuzo awuboneli naziphi iimpendulo ngaphandle kokusenza sizive sinetyala ngenxa yokuba sisibuze kuqala. Enyanisweni, kutheni wena? Akukho mntu ukhuselekile entlungu. Yenza umbuzo nje umbuzo uze ubuze "kutheni le nto?" Ngokubuza ukuba "kutheni oku" kusenza siqondise iingcamango zethu nezenzo zethu ezidlulileyo ezinokuthi zibe negalelo kwimeko yethu yangoku, esivumela ukuba sifumane ingcambu kwimeko.
Ixesha lokucamngca okanye elinqabileyo - Kuphela ekuthuleni sinokuva ilizwi likaThixo. Vumela ixesha lokuphumla ukubonakalisa iiminqweno zakho kwaye uphulaphule ngokukhawuleza kunye nenyameko kwinto eyenzekayo malunga nawe. Uya kufumana iimpendulo zakho ngokuthula.
Gcina Ingqondo Yobunono - Ukunciphisa ubunzima bodwa kuya kukukhokelela ekudakaleni nasekudakaleni. Thatha i-hobby, yenza okubhaliweyo, ukuzithandela ixesha lakho okanye ukuchitha ixesha kunye nabahlobo kunye nosapho. Naluphi na, okanye konke oku, kuya kwenza ukuba uzive kakuhle ngawe, ukuvumela ukuba ufuna ukuqhubela phambili.
Umsebenzi ukuya kwixesha elizayo - nokuba ungeva izinto ziqhubela phambili, sebenza ekudaleni ikusasa ofuna. Unokutyala imbewu encinane ngokubuyela esikolweni, funda izinto ezihambelana neminqweno yakho, zibophe ngokubhala phantsi iinjongo zakho kunye neminqweno okanye inethwekhi nabantu abanomdla. Isinyathelo ngasinye osithathayo, kungakhathaliseki ukuba kukuncinci kangakanani kwikamva lakho.
Thembela - Myeke uvumele uThixo . Yonke into esinokuyilawula ngayo iinjongo zethu kunye nesisu sokuziva (okanye intliziyo yenqweno) yinto esithemba ngayo isiphumo sobomi bethu. Bonke abanye baya phezulu kumandla amakhulu kunabo. Thembela i-Universe iya kunika ngokuqinisekileyo oko kukufunayo xa uyidinga.
Ukubhala Ubungqina Bakho BamaKristu
Iimephu zeeHlabathi zeHlabathi
Kutheni Abantu Bakholelwa KuThixo Nenkolo?